အမေရီကန် နေတိုး မဟာမိတ်တို့ပါဝင်နေတဲ့ ယူကရိမ်း စစ်ပွဲ (လှလိုက်တဲ့အကွက် !) – MMOnlineNews
အမေရီကန် နေတိုး မဟာမိတ်တို့ပါဝင်နေတဲ့ ယူကရိမ်း စစ်ပွဲ (လှလိုက်တဲ့အကွက် !)
ခုမှ သဘောပေါက်တယ် လှလိုက်တဲ့အကွက် ဘာထူးမှာလည်း ဒီဗျုဟာကလည်း နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တွေ ဝင်တိုက်နေသလိုပဲပေါ့ဗျာ။ခုလို နိုင်ငံစုံက ကူညီလာတိုက်ပေးတော့ နေတိုး US ဝင်လာတာပါပဲ တရားဝင်ဆို ပွဲကြီးပြီး နူထိပါလာမှာဆိုးလို့ ယူကရိန်းက တိုက်ပေးချင်သူတွေလာပါလို့
ဗော်လန်တီရာနေရာကနေ တစ်ဖက်လက်နဲ့ အစားထိုးခေါ်လိုက်တာ။လာကူတိုက်ပေးသူတွေက ကမ္ဘာကြီး အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ W3 ကာကွယ်ဖိုဆိုပြီး အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဝင်လာကြတော့ ပူတင်တို့ ရူးခါပေါ့ ။ဘာမှကို ပြောမရဘူး တဖက်လှည့်နဲ့ အကူညီပေးသလိုဝင်လာတော့ ဘာမှလည်း စောတကတက်လို့မရဘူး
ဒီတော့လာသူတွေကလည်း မဟာမိတ်နဲ့ နေတိုးထဲက အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၃၀ကျော်ထဲက ပြေးမလွတ်တော့ နေတိုးဝင်ချနေသလိုပဲ ဖြစ်စေတာပေါ့ ဒီတော့ စဉ်းစားမိတာ ကိုယ်တွေလည်း ၂၀၀လောက်လွှတ်ကူရင် အဆင်ပြေမလားဆိုပေမယ့်– ပြည်တွင်းပွဲကြပ် ကန်နေမှုရယ်
– ယူကရိန်းစစ် ကြာရှည်မှုရယ်
– ပူတင်တင်းပြီး စကစကို ကူညီမှုရယ်ပိုမိုပြီးသာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် မိုင်းနပ်ပဲပြပါလိမ့်မယ်ဆိုတာ သဘောက ကိုယ်တွေကို ပြန်ကူညီရင် ယူကရိန်းအရေးပြီးမှဆိုတိုင်လေ မဟုတ်ပဲ ကြားထဲက ကူညီရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေ ဒါပေမယ့် % နည်းသလို ခံစားမိတယ်
ဒီတော့ လက်နက်ရော လူရော တဖက်လှည့်နဲ့ ဝင်ရအောင်ကူညီနေတဲ့ နေတိူး US ယူကိန်း သုံးကောင်ပေါင်းလောင်းကျော်အကွက်ဟာ ပူတင်ကြီးကို ခါချနိုင်မလား ဆိုတာကို ဆက်စောင့်ကြည့်ဖွယ်ရာပါပဲဟုသေချာတာက ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ ပွဲမှာ ယတိပြတ် ပြောမရသေးလို့ လုပ်ကွက်တွေကို သဘောကျလို့ ချပြရုံသာသာပါဗျာ !
← သိန်း ၉၅၀ နဲ့ RC ၂ ထပ်ခွဲတိုက် မနေ့ကမှ ဆေးသုတ်ပြီးတဲ့အိမ် ဒီနေ့ဖျက်ရတယ်စဉ်းစားကြည့် ကိုယ့်အလှည့် ဘယ်ချိန်လဲလို့
ရုရှား ယူကရိမ်း စစ်ပွဲအတွင်း အသုံးပြုနေကြသည့် နာမည်ကြီး ခေတ်မီတင့်ဖျက်ဒုံးကျည် စစ်လက်နက်များ အကြောင်း →